Xasan Sheekh oo xilka ku wareejiyay madaxweyne Farmaajo iyo hadiyado uu guddoonsiiyay (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xasan Sheekh oo xilka ku wareejiyay madaxweyne Farmaajo iyo hadiyado uu guddoonsiiyay (SAWIRO)
Waxa maanta xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ka dhacday xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay xilalka ku kala wareegayeen madaxnihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha cusub ee la doortay Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa si rasmi ah maanta xilka ugala wareegay madaxweynihii hore ee Soomaaiya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana xafladda xil-wareejinta ah kasoo qeyb-gashay marti sharaf kala duwan ee xafladaasi lagu casuumay.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxweyne Farmaajo ku wareejiyay hadiyado kala duwan oo la siiyay mudadii 4-ta sano ahayd ee uu xilka haayay.
Sidoo kale, waxaa goobta ay ka dhaceeysay xil wareejinta lagu soo bandhigay hadiyadaasi ay ka mid ahaayeen agabyo kala duwan islamarkaana ka sameysan dahab iyo qalin oo ay ku jirto seef dahab ah.
Madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u mahad celiyay intii la soo shaqeeysay mudadii 4-ta ahayd ee uu xilka haayay, isagoo soo hadal qaaday shacabka Soomaaliyeed, ciidamada daka iyo kuwa ciidamada AMISOM.
Sidoo kale, waxaa isna goobta ka hadlay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo, isagoona u mahad-celiyay madaxweynahii hore Xasan Sheekh iyo martidii kasoo qeyb-gashay munaasabadda xil wareejinta ah.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dowladda cusub ee Soomaaliya ay tahay mid shacab ah, islamarkaana uu dhawaan soo magacaabi doonno ra’iisul wasaare soo dhisa xukuumad cusub, isagoona dhinaca kale ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan dowladda cusub ee u dhalatay Soomaaliya.